मारिन सक्छु, तर म नेपाल फर्किन्छु : बीपी कोइराला - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
मारिन सक्छु, तर म नेपाल फर्किन्छु : बीपी कोइराला
सन्तोष खडेरी २ महिना पहिले
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य कुमार्फत अपदस्थ गरी कोइरालालाई हिरासतमा राखे। लगातार आठ वर्षसम्म हिरासतमा बन्दी जीवन बिताएका कोइराला २५ सालमा रिहा भएलगत्तै भारत निर्वासनमा गए। भारतमा आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवनपछि पुनः राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के।
२०३३ पुस १६ (३० डिसेम्बर १९७६)का दिन नेपाल ओर्ले। विमानस्थलबाट उनलाई हिरासतमा लिएर सुन्दरीजल जेल चलान गरियो। बीपीको स्वास्थ्य अवस्था बिगँ्रदै जाँदा नेपालमा त्यसको उपचार सम्भव नहुने भएपछि एकातिर बढ्दो दबाब र अर्कोतिर डा. तुलसी गिरी नेतृत्वको सरकारको अनुदार रवैयामाझ पनि तत्कालीन राजदरबारले उनलाई रिहा गरी थप उपचारका लागि अमेरिका पठायो। १९७७ जुनमा अमेरिका पुगेका बीपीले अगस्ट महिनामा शल्यक्रियापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेट्ने चाह राखेका रहेछन्। त्यसै बेला उनको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएको थियो। राष्ट्रपति कार्टरसँग त्यति बेला उनको भेट हुन सकेन। उनलाई फाँसीको सजायसमेत हुन सक्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा धेरैले नेपाल नफर्कन सुझाव दिइरहेका थिए। भारतमा समेत इन्दिरा गान्धीको सरकार हटेर बीपीसँगको निकट सम्बन्ध भएको जनता पार्टीको संयुक्त सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा उनलाई त्यहाँ रहन सहज हुने अनुमान गरिँदै थियो।
उनी अब नेपाल फर्कंदैनन् भन्ने चर्चामाझ आफूलाई प्राप्त सुझाव र अनेकन अनुमानलाई चिर्दै बीपी ८ नोभेम्बर १९७७ मा भारत हुँदै पुनः नेपाल फर्किए। पुनः विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी उनलाई हिरासतमा पठाइयो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा आफ्नो विदेश नीतिमा मानवाधिकारलाई समावेश गर्ने प्रथम राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मानवाधिकार अभियानले त्यति बेला संसारभर रहेका राजबन्दीमा एक किसिमको तरंग ल्याएको थियो। त्यसको बाछिटा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस दल र तिनका नेतासम्म परेको थियो। सन् १९७८ मा समेत हिरासतमा बिरामी अवस्थामा रहेका बीपीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रिहाइका लागि अमेरिकाभित्रैबाट आवाज उठ्दै गर्दा कार्टर सरकारले चासो देखाएको थियो।
२४ अगस्ट १९७७ मा अमेरिकाको ‘पीबीएस’का लागि जिम लेह्रेर र रोबर्ट म्याकलिनले बीपी कोइरालासँग लिएको भिडियो अन्तर्वार्ताको पाठको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत छ। यसलाई विदेशमा नेपालबारेका ऐतिहासिक सामग्री खोज्ने युवा अनुसन्धाता सन्तोष खडेरीले अनुवाद गरेका हुन्।
थप समय जेलमै रहने अवस्था हुँदाहुँदै पनि तपाईं किन यथाशीघ्र नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, मैले राजासँग विश्वास कायम राख्नुपर्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, म यहाँ आफ्नो औषधि उपचारका लागि नै रिहा भएको हुँ। अहिले पनि जमानतमा नै छु। यसैले फर्किएर जानुपर्छ र जान्छु। उपचारपछि म फर्किएर जेलमा नै गएर आफूविरुद्धको मुद्दाको सामना गर्ने धारणा राजालाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। दोस्रो कुरा, मलाई आफ्ना मान्छे, सहयोद्धाहरू, प्रजातान्त्रिक अधिकार पुनःस्थापनाका लागि मसँगै लडिरहेका व्यक्तिहरूसँग समेत विश्वास कायम राख्दै प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर अघि बढ्नु छ। यही दुई कारणले म फर्किएर जान्छु।
यहाँबाट फर्किएर जाँदा आफूलाई केही हुने आशंका गर्नुहुन्छ कि ?
तपाईंहरू देखिरहनुभएकै छ। राजा तिनै हुन ! त्यहाँ मैले गम्भीर अभियोगहरूको सामना गरिरहेको छु। मविरुद्ध सात प्रकारका फरक फरक गम्भीर अभियोग छन्।
राजद्रोहको अभियोग, बलपूर्वक सरकारलाई नै सत्ताबाट बर्खास्त गर्ने ती र त्यस्तै प्रकारका ?
हो, अनि प्रत्येक अभियोगको सजाय मृत्युदण्डसम्म। जब मेरो घाँटीमा गम्भीर समस्या देखियो तब राजाले नै मलाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने निर्णय लिए। मलाई लाग्छ, यो एउटा राम्रो जनाउ थियो। र उनको तर्फबाट आएको महान् संकेत नै भनूँ। मलाई मानवीय आधारमा मात्र अल्पकालीन रूपमा रिहा गरेजस्तो लाग्दैन। यसलाई मैले एउटा सकारात्मक राजनीतिक संकेतका रूपमा समेत लिएको छु।
तर, यदि तपाईं फर्किएपछि...
मलाई यस्तो लाग्दैछ, म फर्किएर पछि सायद मलाई जेलमा फिर्ता पठाउने छैनन्। मलाई थाहा छैन।
तपाईंको भनाइको आशय तपाईंविरुद्धको अभियोग हटाउनेछन् भन्ने हो ?
हो, हरेक पक्षबाट अहिले त्यहाँ परिवर्तनको लहर चलिरहेको छ। हावाको बहाव त्यस्तै छ। मैले निर्माण गरिरहेको पनि त्यही हो। हाम्रो क्षेत्रमा अहिले परिवर्तनको हावा बहेको छ। पहिलो, जब गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा हामी नेपाल फर्कियौं, त्यति बेला नै हामीविरुद्ध केही गम्भीर अभियोग छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो तर पनि हामीले फेरि सोच्यौं कि अहिले आपसी टकरावभन्दा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ र हामी स्वयंले आफूलाई राजाको बाहुमा सुम्पियौं।
र, उनले तपाईंलाई जेलमा राख्ने निर्णय लिए ?
हो, उनले त्यस्तै निर्णय लिए। हामीले यो पनि सोचेका छौं कि यस क्षेत्रमा अहिले केही नयाँ विकासको अंकुरणले स्थान पाउने सम्भावना छ। किनकि, भारतको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले भारत, पाकिस्तान र सिलोन ( श्रीलंका)मा पूर्ण परिवर्तन भयो र म भनिरहेको छु, परिवर्तनको बहाव बढ्दो छ।
के म तपाईंलाई यो सोध्न सक्छु ? तपाईं फर्किनुभयो र तपाईंविरुद्ध लागेका सबै अभियोग हटाइएर तपाईं राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनका लागि स्वतन्त्रता अनुभूत गर्दा के गर्नुहुनेछ ? यहाँविरुद्धको एउटा अभियोग योसमेत छ कि जति बेला तपाईं आफ्ना अनुयायीका साथ भारत निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईंको समेत सहमतिले सत्ताविरुद्ध सशस्त्र हमला भयो। वर्तमान सत्तालाई उखेलेर फाल्न आवश्यक देख्नुभयो भने हिंसाको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा अन्य ?
होइन, तथ्यपरक रूपमा जब हामी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं, मेरो प्रयास एक स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा समेत नेपालमा राष्ट्रिय सहमति कायम राख्ने नै हुनेछ। दक्षिण एसियामा विकसित भइरहेको नयाँ परिदृश्यमा हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने पहिले त एकताबद्ध हुनैपर्छ। त्यसैले मेरो आग्रह राजालाई र अन्य सबै पक्षलाई समेत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहनु नै हुनेछ। मलाई लाग्छ- यदि मेरो आग्रह प्रभावकारी रह्यो भने साँच्चै त्यो सकारात्मक क्षण हुनेछ। हेर्नुहोस् म पुनः यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो योजना कस्तो छ ? यो समयको गति हो र म के महसुस गर्छु भने यो राजनीतिक प्रतिबन्धभन्दा बाहिर रहेर राष्ट्र निर्माण आवश्यक छ। राष्ट्रपति कार्टरले मानवअधिकारका पक्षमा अडान लिएका छन्। भारतमा कसैले जित्नै नसकिने भनेर मानिएकी नेता इन्दिरा गान्धीले त निर्वाचन गर्ने आह्वान गरिन्, जुन उनका लागि आवश्यक पनि थियो। यसकारण, परिवर्तनको पथ यो थियो।
यही परिवर्तन÷हावाको बहाव यहाँले भनिरहनुभएको हो ?
के तपाईं तिनीहरूको भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ जसले नेपालको वास्तविक समस्या आर्थिक भनिरहेका छन् ? अहिले नेपालको वार्षिक आय प्रतिव्यक्ति एक सय एघार अमेरिकी डलर छ। प्रजातन्त्रले आधारभूत आर्थिक समस्याहरूमा कसरी मद्दत पुर्‍याउँछ ?
हामी यही सोचले विकास गर्न सक्दैनौं। विकासमा संलग्न सम्पूर्ण समुदायको आर्थिक विकास भइरहेको छ। त्यसैले त यहाँ एउटा कारखाना स्थापना भएको छैन, त्यस्तै त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादका लागि एउटा चक्लाबन्दी फाँट निर्माण गरिरहेका छैनौं तर अमेरिकाबाट सहायता भने लिइरहेका छौं। जब तपाईंले तल पुछारबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, साँच्चै तब सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक विकासको प्रक्रियामा सहभागिता गराउन हामीलाई संस्थान आवश्यक पर्छ जसले राजनीतिक हित गर्छ। आज के भइरहेको छ भने कोही एकदमै सक्षम व्यक्तिले विकासको योजना बनाइरहेका छन्, कोही संयुक्त राज्यमा आएर कार्टरलाई भेट गरी पैसा पाउँछन् र यहाँ यिनीहरूले योजना प्राप्त गर्छन्। यसैले त हाम्रो नारा नै छ, ‘विकासका लागि प्रजातन्त्र’।
कोइरालाजी मैले नेपालबारे पढेका थुप्रैमध्येको एउटा भनाइ आज यहाँलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। राजाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीको भनाइमा जनताले सरकार भनेको स्वच्छ पिउने पानी, विद्यालय बाटोघाटो र अस्पताल हो भनेर भन्छन् प्रजातन्त्रबारे सोध्दैनन्।
प्रजातन्त्रबारे नसोध्ने जनता को होलान् मलाई थाहा छैन। करिब आठ÷दस महिना पहिले राजाले आफ्नो सोचको राजनीतिक प्रणाली पञ्चायती व्यवस्था थालनी गरे।
ग्रामीण निकायमा (स्थानीय तहमा) आधारित। अनि क्षेत्रीय तह हुँदै अन्त्यमा राष्ट्रिय पञ्चायत (संसद्)सम्म।
- हो, यो एक किसिमको तहगत पद्धति नै हो। यो पछिल्लो सोह्र वर्षदेखि लगातार चालू अवस्थामा भए पनि जनताले यसलाई इन्कार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राजाले बुझे। त्यसका लागि त्यहाँ विपक्षीको कुनै आवाज नै नसुनिने भएकाले यो जनताले स्वीकार गरेझैं देखिएको हो। अहिले राजाले जनताको अभिमतको मूल्यांकन गर्ने हेतुले उनीहरूको विचार बुझ्न खोजिरहेका छन्। हालै राजाले एउटा सुझाव समिति नै गठन गरेर उक्त समितिलाई जनतासमक्ष पुगेर उनीहरूको विचार बुझेर संविधानमा के के संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यो सुधार गर्ने विषयबारे सुझाव सिफारिस गरी आफूसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्। जब उक्त समिति जिल्लामा पुगेर लिखित रूपमा उनीहरूका विचार, मौखिक दस्तावेज जम्मा गर्न सुरु गरे तब त जो कोही अवाक् भए। किनकि अहिलेसम्म नसुनिएका जनताले त्यहाँ त प्रशासनिक व्यवस्थाको उदारीकरणको माग गरेजस्तो कि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको नागरिक स्वतन्त्रता। त्यस्तै केहीले त वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध समेत आफ्ना विचार व्यक्त गरे।
हजुर प्रधानमन्त्री रहेको संक्षिप्त समय सन् १९५९÷६० तिर जनताले स्वाद चाखिसकेको के त्यही नागरिक स्वतन्त्रता ?
हो, अहिले उनीहरू सबै त्यसको पुनर्बहाली चाहन्छन्।
म तपाईंलाई यो सोध्न सक्छु- तपाईं आफैंसँग तपाईंलाई समर्थन छ भन्ने प्रमाण के छ ? तपाईं एकदुई पुस्ताका नेपालीहरूमाझ व्यापक परिचित राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तपाईंबारे कुरा गर्दा तपाईंलाई युवा पुस्ताको व्यापक समर्थन छ भनेर सधैं भनिन्थ्यो तर आज तपाईंसँग त्यसको प्रमाण के छ ? तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ- आज पनि तपाईंलाई त्यो समर्थन छ वा तपाईंले त्यो समय गुमाइसक्नु भयो ?
किनभने भर्खरै मात्र जब त्यहाँ चार सदस्य स्नातक क्षेत्रबाट चुन्ने व्यवस्था गरे। (स्नातकहरू जसले स्नातकसम्मको शिक्षा लिएका छन्) त्यहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा चारैजना हाम्रा सदस्य निर्वाचित भए।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा ?
हो राष्ट्रिय पञ्चायतमा। मलाई लाग्छ- १३ हजार मतदाता भएको क्षेत्रमा हामीले समर्थन गरेका चार जना उम्मेदवार स्नातकबाट सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भए। सरकारको परिपत्रका बीच विजयी भएका उनीहरूलाई जितपछि जेल पठाइयो।
तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सरकारसँगको यो निष्पक्ष जाँचमा तपाईंले जित्नुभयो र सरकार पराजित भयो ?
जहाँ जहाँ मानिसलाई आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, त्यहाँ उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गरिरहेका छन्।
के राजा खराब व्यक्ति हुन त ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि उड्न तयार हुनुभन्दा पहिले राजाका साथ मेरो नब्बे मिनेटको समय थियो। यो यस्तो थियो- जब मेरो स्वास्थ्यमा केही लक्षण देखिएपछि उनले मलाई जाँच्न आफ्नो शाही चिकित्सकलाई मकहाँ पठाए। उनले राजालाई मेरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे ज्यादै गम्भीर रिपोर्ट दिएपछि राजाले मलाई लिन पठाए। उनीसँग मलाई नब्बे मिनेट संवाद गर्ने समय मिल्यो। उक्त संवादबाट म प्रभावित भएँ। त्यस्तै उनी साह्रै समझदार व्यक्ति भएझैं लाग्यो।
तपाईंले माथि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो- तपाईंलाई जेलबाट रिहा गरी उपचारका लागि लाग्ने खर्चसमेत उपलब्ध गराएर अमेरिका पठाउने राजाको निर्णय मानवीय आधारमा नभई त्यो राजनीतिक आधारमा थियो ? तपाईंलाई उनले किन यस्तो के गरे होलान् भन्ने लाग्छ ?
किनभने सबैभन्दा पहिला म भन्छु, अहिले त्यहाँ परिवर्तनको हावा बहेको छ, जुन मैले भनेको थिएँ। दोस्रो राष्ट्रपति कार्टरको प्रजातन्त्र, मानवअधिकारप्रतिको जुन अडान छ, त्यसले हाम्रो क्षेत्रको दुनियाँमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
तपाईंले आफू फर्किएर जाने कुरा गर्नुभयो। राजाप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धताको सम्मानका लागि पनि तपाईं फर्किएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। राजाले पनि तपाईं फर्किएर आउने अपेक्षा गरिरहेका छैनन् भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ? यो सुखद निर्वासनको अर्को रूप हो भनेर म तपाईंलाई भनिरहेको छु।
अँह मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राजाले म फर्किएर आओस् भन्ने नै चाहन्छन् किनकि राजाले मलाई भनेका थिए कि तिमी फर्किएर आउनैपर्छ र तिमीले आफूविरुद्धका मुद्दाको सामना गर्नुपर्छ भनेर, त्यस्तै मैले पनि राजालाई आफू फर्किएर आउनेछु र मुद्दाको सामना गर्छु भनेको थिएँ।
के तपाईं यो कुरा महसुस गर्नुहुन्छ- राजाले साँच्चिकै फर्किएर आऊन् भन्ने चाहन्छन् वा उनी तपाईं यो बाटोबाट हटून् भन्ने चाहन्छन् ?
त्यो त म भन्न सक्दिनँ।
यहाँ रहेर हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? तपाईं के सोच्नुहुन्छ के राजाले साँच्चिकै म फर्केर आऊन् भन्ने चाहन्छन् वा उनले तपाईंलाई फर्किएर आउनाबाट रोक्न जेलमा राख्ने कुरा गरेका हुन् ?
मेरो विचारमा राजा म फर्किएर आओस् भन्ने चाहन्छन्। किनकि त्यो मामिलामा म उनको सामुन्नेमा हुनेछु र त्यसले उनलाई अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ।
तपाईंले राजालाई धेरै समस्या निम्त्याउन सक्नुहुनेछ। के राजनीतिक रूपमा पनि ?
उनी राजनीतिक उदारीकरणमा कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैनन्। म यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले उनी इच्छुक हुन्छन् होला भन्ने आशा राख्छु।
तपाईंले भन्नुभयो कि राष्ट्रपति कार्टरको मानवाधिकारको अडानले तपाईंको दुनियाँको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। तपाईं कार्टरसँग भेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के यो संकेत हो- कार्टरसँग तपाईं एक हुँदै हुनुहुन्छ ?
मलाई थाह छैन।
तपाईंले अझै स्वीकृति वा निमन्त्रणा पाउनुभएको छैन ?
होइन, मैले कार्टरलाई पत्र लेखेको छैन तर मैले अस्पतालमा केही व्यक्तिसँग भेट गरेको छु।
र, तपाईंले त्यो जानकारी दिनुभएको छ ?
तपाईंका तर्फबाट कोही व्यक्तिले कार्टरलाई पत्र लेखेका छन्, होइन ?
तपाईं राष्ट्रपति कार्टरसँगको भेटले के हासिल हुने आशा गर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेका मानिसहरूका लागि कार्टरसँगको भेट नैतिक समर्थनको रूपमा रहनेछ। हामीले थाहा पाउनेछौं। त्यस्तै मुलुकले थाहा पाउनेछ कि विश्वका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हाम्रो मुलुकको प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्। यो नेपालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा कार्टरको एक प्रकारको मतदानझैं रहनेछ।
तपाईं राष्ट्रपति कार्टरले अरू केही गरून् भन्ने चाहनुहुन्न, तपाईं मात्र उनीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईंका लागि प्रतीकात्मक रूपमा यति नै पर्याप्त छ कि भेटपछि उनले के गर्छन् भन्ने कुराको तपाईंले पर्वाह गर्नुहुन्न ?
- हो त्यत्ति नै पर्याप्त छ।
कोइरालाजी के तपाईंले भ्लादिमिर बुकोभस्की (सोभियत युनियनका विद्रोही अभियन्ता जो लगातार १२ वर्षसम्म सोभियत युनियनमा जेल जीवन बिताएपछि सन् १९७६ मा पश्चिमी मुलुकमा निर्वासित भएर कार्टरसँग भेट गरे।) को जस्तै आफ्नो स्थिति देख्नुहुन्छ ?
होइन। यो फरक छ।
भ्लादिमिर बुकोभस्कीको यात्रासँग यो हुने भेट के प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ ?
होइन, केही फरक छ। म राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यहाँ सोभियत युनियनमा केही व्यक्तिगत असन्तुष्टि छन्। त्यसका साथै हामी वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छौं र त्यहाँको असन्तुष्टि वैकल्पिक होइन। यसको सतही भिन्नता यो हो।
म तपाईंलाई यो सोध्न चाहन्छु- जहाँसम्म मलाई सम्झना छ, अमेरिकाले सन् १९५१ देखि हालसम्म उपलब्ध गराएको सहयोग राशि जम्मा दुई बिलियन अमेरिकी डलर हो। यहाँ वासिङ्टनबाट यस्ता खबर आइरहेका छन् कि वर्तमान कार्टर सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने हालको सहयोग राशिमा दोब्बर वृद्धि गर्न गइरहेको छ। यसो भयो भने के यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्नेमा प्रभावी नहोला र ?
म यसलाई दुई अलगअलग भागमा राखेर हेर्न चाहन्छु। म यसो गर्न चाहन्छु किनकि एउटा हाम्रो सिंगो देशका लागि आर्थिक सहयोग हो र अर्को राजनीतिक मुद्दा हो। मलाई आशा छ, राष्ट्रपति कार्टरले दुवै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। एउटा, आर्थिक सहयोगको बढोत्तरी र अर्को, प्रजातन्त्रका लागि अडान।
हजुर ठीक छ। के तपाईं त्यस्तो किसिमको आर्थिक सहायताका लागि मानवाधिकारको तार पनि जोड्न सिफारिस गर्नुहुन्छ त ?
अँह होइन। मैले यसको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि यो आवश्यक छैन। यही कुरा मैले यहाँ वासिङ्टनका मानिसलाई भनिरहेको छु। त्यति नै पर्याप्त छ। जहाँसम्म मेरो सरोकारको विषय हो- यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले उसले भन्ने गरेको आदर्श प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँछ भने दुनियाँभरका मानिस यसबारे जानकार भई जब यसको वास्तविक अर्थ मानवाधिकारका पक्षमा कार्टर अडान फगत सार्वजनिक खपतका लागि होइन न त यो शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा सोभियत युनियनविरुद्ध कुनै नियोजित प्रचार नै हो भन्ने बुझ्छन्। तब मात्र कार्टरले मानवाधिकारको विषयमा के विचार राखे भन्नेले झन् अर्थ राख्छ। मलाई त्यति नै पर्याप्त लाग्छ।
मानवअधिकार कत्तिको खराब छ ? राजाको पञ्चायती सरकारविरुद्ध गएर प्रजातान्त्रिक विचार राख्नेको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ नेपालमा ?
मलाई लाग्छ- मानवाधिकार प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग वास्तवमा नै जोडिएको छ।
तर नेपालमा त्यसलाई कुन हदसम्म इन्कार गरिएको छ त ? अर्को अर्थमा कति खराब छ त ?
यो धेरै नराम्रो हुन्थ्यो तर अचेल त्यत्ति खराब छैन। त्यसैले म यो भन्छु- म फर्किएर जाँदा मलाई आशाको किरण देखिँदैछ। यही कारण पनि म आशा गर्छु- जब म फर्किन्छु तब त्यहाँ केही नयाँ विकास हुन सक्छ।
कोइरालाजी, यहाँ अमेरिकामा नै हजुरको एउटा शल्यक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ र मैले बुझेअनुसार छ महिनामा अर्को शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्नेछ। जब तपाईं फर्किएर जानुहुन्छ तब तपाईंले त्यहाँ कल्पना गरेभन्दा पनि खराब र त्योभन्दा पनि झन् खराब समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ भने यहीँ निर्वासनमा किन बस्नुहुन्न ? तपाईं त्यहीँ फर्किएर जान किन यतिविघ्न मरिहत्ते गर्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ- मैले ती सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ पहिले नै दिइसकेँ।
० मेरो जिज्ञासा व्यक्तिगत रूपमा छ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरू अझै त्यहाँ जेलमै छन्। मलाई लाग्छ- तपाईंका धेरै नजिकका साथी पनि त्यहीँ छन्।
मेरा साथीहरू त्यहाँ छन्। मेरो परिवारका केही सदस्यहरूको विरुद्धमा गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी भएको छ, जस्तो कि मेरो जेठा छोरा उनी अहिले भारतमा निर्वासित छन् र नेपाल फर्किन सक्दैनन्। मेरो कान्छो छोरो र मेरो एक जना भाइबुहारीविरुद्ध समेत राजद्रोहको अभियोग छ। त्यस्तै मेरी एकजना भान्जी (शैलजा आचार्य)समेत अहिले जेलमा छिन्। उनी गत वर्ष मसँगै नेपाल फर्किएकी हुन् र अहिले जेलमा छिन्। अहिले नेपालको जेलमा उनी एक मात्र महिला राजबन्दी हुन्।
अहिलेको यो वर्तमान अवस्था र यी परिस्थितिहरूमा तपाईंका धेरै जना मानिसले तपाईं फर्किएर जानु हुँदैन भन्ने बुझेका छन्...
.तर म यहाँ बसेर मेरो स्वास्थ्यको राम्रो हेरचाहबाहेक म अरू के नै गर्न सक्छु र ? म त्यहाँ गएँ भने त्यहाँ भएका थुप्रै जेल नै हाम्रो राजनीतिक पार्टी कार्यालय हुन्। म टाढा भएँ भने पनि मेरो विचारमा आफू कैदी हुनुको नाताले प्रजातान्त्रिक अधिकारको संघर्षका लागि मेरो योगदान धेरै छ भन्ने लाग्छ।
१२ पुष २०७६ को अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट